कुण्ठा, कचकच र यौनमा कचमच « Janata Samachar
कुण्ठा, कचकच र यौनमा कचमच
प्रकाशित मिति : 12 February, 2019 1:46 pm
एउटा द्रबित आत्माको मनोवैज्ञानिक लक्षण दर्शाउन ओशोले प्रवचनमा निजी जीवनकै घटना उल्लेख गरेका छन् । दर्शन शास्त्रका एक प्रोफेसर ओशो भेट्न गए । उद्यानमा ओशो र प्रोफेसर गफिँदै थिए । नजिकै एक जोडी आलिंगन र चुम्बनमा अभ्यस्त थिए । प्रोफेसर ओशोसँग गफिँदै, घरिघरी छड्के आँखाले प्रेमालिङ्गनमा अधीर जोडी हेर्थे । प्रोफेसरले आफूलाई संयमित राख्न सकेनन् । उनको ध्यान र दृष्टि प्रेमील जोडीको प्रेमक्रीडामा तानिइरहेको थियो । वार्तालापमा केन्द्रित नभएको देखेर ओशोले प्राफेसरलाई भने, तपाईंको आँखा किन उता बटारिन्छ बारम्बार ?
प्रोफेसर लज्जाले रातोपीरो भए । उनले हर्कत ढाकछोप कसरतमा भने, ‘हेर्नुहोस्, कस्तो जवाना आयो ! हामी दुई जना अभिभावक उमेरका यहाँ बसेका छौँ । यी दुई तरुणलाई लोकलाज नै छैन ।’ प्रोफेसरको कुरामा ओशोले भने, ‘दुई जोडी आपसमा प्रेम गरिरहेका छन् । त्यसमा तपाईंको के हानी–नोक्सानी भयो र ? समस्या तरुण पुस्तामा छैन । समस्या तपाईंको दिमागमा छ । किन अधीर हुनुभएको ? उनीहरु घण्टौँदेखि आलोडनमा लिप्त छन् तर मैले त एकपटक पनि उता हेरिनँ । उनीहरु लज्जाविहीन होइनन्, तपाईंको आत्मा अतृप्त हो ।’
सबै प्राणीमा यौनप्रति अभिरुची हुन्छ । तर यौनिकता मानिस मात्रमा हुन्छ । यौन अनुराग र क्रीडाप्रति आतुरता यौन हो तर यौनबारे चिन्तन यौनिकता हो । प्रेम र यौन प्रतिबन्धले मानिसको दिमाग यौनिकताले भरियो । मष्तिष्कमा एकथरी कुरा र व्यवहारमा अर्को देखाउने सुविधा मानिसलाई छ । ओशो भन्छन्, ‘मानिसको आन्तरिक चेतनामा के कुरा खेलिरहेको छ भनेर जाँच्ने वा पत्ता लगाउने यन्त्र अविष्कार भएको छैन । तर वास्तविकतामा मानव मष्तिष्क सर्वाधिक यौन चिन्तनमा नै व्यस्त हुन्छ । समाज विक्षिप्तताको किनारसम्म पुग्यो । मानवको गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य, मिडिया र अखबार सबै यौनले भरियो ।’ दमनले विस्फोट निम्त्याउने र प्रतिबन्ध कौतुहलता बढाउने सिंग्मण्ड फ्रायडको यौन मनोविज्ञानको मीमांशा पूर्वीय समाजबाटै टिपिएको हुनुपर्छ ।
मानिस बाहिरबाट सद्दे देखिन्छ तर भित्रीरुपमा उ रुग्ण हुन्छ । रुग्ण मनले बातैपिच्छे यौन कुण्ठाको लक्षण देखाउँछ । उदाहरण, उपमा र दृष्टान्त दिँदा पनि वाक्यसँग यौन जोड्छ
प्रेम र यौनप्रतिको पूर्वीय चिन्तनले समाजको चेतना कुण्ठाग्रस्त बन्यो । मानिसको आत्मा द्रबित भयो । यौन र प्रेममाथिको प्रतिबन्धले मानिस अतृप्त रहे । मन जिज्ञासाले भरियो । कौतुहलता बढ्यो । विपरीत लिङ्गीलाई सघन नयनले हेर्ने अभिप्सामा वृद्धि भयो । यौन क्रीडाबाट निर्मित त्यसकारण प्रतिभा प्रष्फुटनको सम्भावना पनि क्षीण भयो । मानव मष्तिष्क अधिकांश समय यौन चिन्तनमा व्यस्त रह्यो ।
विपरीत लिङ्गीसँग भौतिक दूरीको कमी र शारिरीक सानिध्य हुँदा अनुराग बढ्छ भन्ने मान्यताले समाजमा महिला र पुरुषबीच दूरी बढाइयो । तर दूरी बढेको कारण मानवीय चेतना कुण्ठामा डुब्यो । चित्त नै रुग्ण बन्यो । एउटी केटीसँग बोल्न लालयित युवा जिब्रो पडकाउँछ । यथार्थमा उसको वार्तालाप गर्ने इच्छा छ तर समाजले अनुमति दिँदैन । त्यसकारण जिब्रो पडकाएर बोल्ने अभिलाषा तृप्त गर्छ । कुण्ठाग्रस्त र अतृप्त चेतन हुँडलिन्छ । मानिस बाहिरबाट सद्दे देखिन्छ तर भित्रीरुपमा उ रुग्ण हुन्छ । रुग्ण मनले बातैपिच्छे यौन कुण्ठाको लक्षण देखाउँछ । उदाहरण, उपमा र दृष्टान्त दिँदा पनि वाक्यसँग यौन जोड्छ । बोली र हाउभाउमा आशक्ति लुकेको हुन्छ । विपरीत लिङ्गीको सानिध्यमा जान चाहन्छ ।
कुण्ठाको उपचार हो बोध र भोग । यद्यपि भोगले पनि बोध बढाउँछ । भोगले विरक्ति र विरक्तिले त्यागतर्फ मनुष्य डोरिन्छ । तर बोधको मूलस्रोत ज्ञान वा जागृत चेतना नै हो । जागृत चेतनाको उपलब्धता र विकास दुरुह छ । तर भोग प्रक्रियाबाट कुण्ठामुक्त हुन सरल छ । कुण्ठाले रुग्ण चित्त र यौनिकतामा रुमलिएको मनुवाले भोगको स्थायी प्रबन्ध गर्नु उत्तम हुन्छ । विवाह सबैभन्दा सरल उपाय हो ।